Забур 135 CARS - Nnwom 135 AKCB
6распростёр над водами землю,
8солнце, чтобы управлять днём,
9луну и звёзды, чтобы управлять ночью,
10Того, Кто поразил первенцев Египта,
11вывел из его среды Исраил,
12могучей и простёртой рукой,
13Того, Кто разделил Тростниковое море135:13 См. сноску на 105:7. Также в ст. 15.,
14и провёл сквозь него Исраил,
15но поверг в Тростниковое море фараона и войско его,
16Того, Кто провёл Свой народ через пустыню,
17поразил великих царей,
20и Ога, царя Башана,
21и отдал их землю в наследие,
22в наследие Исраилу, рабу Своему,
25даёт пищу всему живому,
Monkamfo Awurade din;
monkamfo no, mo Awurade asomfo,
2mo a mosom wɔ Awurade fi,
wɔ adiwo a ɛwɔ yɛn Nyankopɔn fi.
3Monkamfo Awurade efisɛ oye;
monto ayeyi nnwom mma ne din, na ɛno na ɛyɛ anisɔ.
4Awurade ayi Yakob sɛ ɔnyɛ ne de,
wayi Israel sɛ nʼade a ɛsom bo.
5Minim sɛ Awurade so;
Ɔso sen anyame nyinaa.
6Awurade yɛ nea ɔpɛ biara
wɔ ɔsoro ne asase so,
po ne mu bun nyinaa.
7Ɔma omununkum ma ne ho so fi asase ano ba;
ɔsoma anyinam ka osu ho
na ɔma ahum tu fi ne koradan mu.
8Okum Misraim mmakan,
nnipa ne mmoa mmakan.
9Ɔsomaa ne nsɛnkyerɛnne ne nʼanwonwade baa mo mfimfini, Misraim,
de tiaa Farao ne nʼasomfo nyinaa.
10Ɔsɛee amanaman pii,
na okunkum ahemfo akɛse,
11Amorifo hene, Sihon
Basan hene, Og
ne Kanaan ahemfo nyinaa,
12na ɔde wɔn nsase maa sɛ agyapade
ɔde maa ne nkurɔfo Israelfo.
13Awurade, wo din wɔ hɔ daa.
Awurade wo din ahyeta awo ntoatoaso nyinaa mu.
14Awurade bedi ama ne nkurɔfo
na obehu nʼasomfo mmɔbɔ.
15Amanaman no ahoni yɛ dwetɛ ne sikakɔkɔɔ
a wɔde onipa nsa na ayɛ.
16Wɔwɔ ano, nanso wontumi nkasa,
wɔwɔ ani, nanso wonhu ade;
17wɔwɔ aso, nanso wɔnte asɛm,
na ɔhome nso nni wɔn anom.
18Wɔn a wɔyɛɛ ahoni no bɛyɛ sɛ wɔn ara,
saa ara na wɔn a wɔde wɔn ho to wɔn so no bɛyɛ.
19Monkamfo Awurade, mo Israelfo nyinaa;
monkamfo Awurade, Aaron fi;
20monkamfo Awurade, Lewi fi;
monkamfo Awurade, mo a musuro no.
21Mumfi Sion nkamfo Awurade,
monkamfo nea ɔte Yerusalem no.
AKCB : Nnwom 135